Somaliland oo Somaliya la midawdaa waa; Eey Mataggiisii Ku noqday
Habon M Kalil | Kalil2@bigpond.com
Somlidu waxay u haystaan oo ay rumaysteen in 1960 ay xoroobeen, oo Djibouti-na xorowday 1977, runtuse waxay tahay in gumaysigii qaabkiisi uu bedelay.Waxaana uu gacanta inoo galiyey basaasiintiisi iyo qabaanadiisi, oo dentiisi sidii hore iyo si ka fiican u socodsiiyey.
Somali waligeed qaran xor ah ma helin, wixii aynu haysanay waxa uu ahaa Qaran Maqaar Saar ah. Geela iyo lo'da marka neefka ay dhalaan ka dhinto way diidan in la maalo, markaa, waxa laga sameeya haragii neefkii yara ee dhintay wax u eeg nirigii ama weyshii. Kaas bay ogolaadan oo lagu maala, waxana la yidhaa maqaar. Somalidu qaranka ay sheeganayeen waxa uu ahaa Maqaar-Saar.
Xoolaha iyo dadku labaduba maskax wey leeyihiin, waxase ay ku kala duwan yihiin wax cilmi nafsiga lagu yidhaa ' Frontal Lobes', oo af-somaliga ku dhawa ereyga la yidhaa garaad. Somalida waxaan weydiinayaa, maxay xoolaha iyo somalidu ku kala duwan yihiin? Mar haddii xoolahii lagu maalay maqaar , somalidiina lagu maalay Qaran Maqaar-Saar ah.
Djibouti, si loo majare habaabiyo dareenkii gobanimo-doonka, waxa uu Faransiisku sameeyey urur lagu sheegay, Ururka Gobanimo-doonka oo Xasan Guuled maddax ka ahaa. Waxana ururkaa mayalka u hayey dhamaan basaasiintii iyo qabaanadii Faransiiska.
Ujeedada uu ka lahaa Faransiisku waxay ahayd in lagu tir-tiro Ururkii Xoreynta Xeebta Soomaliyeed ee 'FLCS' , si ay u suurawdaw dhisid Qaran Maqaar-Saar ah, oo ay gacanta ku hayaan qabanadiisii iyo waxa ka tafiirmay. Waayah ay ku jiraan dadka reer Djibouti maanta is weydiin uma baahna oo waa ' war dhafoorka ayuu ku yaal'.
Somaliland manta waa dad xor ah oo gacanta ku dhigay qaranimo buuxda, oo waligeed somaliyi helin. Su-ashu waxa weeyi, maxaa Somaliland loo aqaaonsan waayey? Waxa Somaliland loo aqoonsan waayey, waxa weeyi, beesha caalamku(reer galbeedku) waxay rabaan Qaran Maqaar-Saar ah(puppet state), tusaale, C/Qaasim ba loo aqoonsan yahay inuu matalo qaran somaliyeed, isguna waa ka yidhaa calankii somaliya ayaan dunida ka taagay.
Aduunku waa laba;
I) Qaramo xor ah ( reer galbeedka)
2)Qaramo Maqaar Saar ah ( puppet states) dunida badankeeda.
Cade Muse wixii dereenkiisa bedelay, ee ku dhaliyey in uu la heshiiyo C/Laahi Yusuf,cadawgu waa og-yahay, somaliduse ma oga. Cade Muse waxa uu ku arkay Hargeysa qaran xor ah oo somaliyeed sharafta iyo wanaaga uu leeyahay. Waxa uu arkay Majeerteenkii Somaliland joogay oo Hargeysa iyo Bosaso iskugu mid tahay. Waxa uu arakay Ogaadenkii oo Hargeysa iyo Dhagax-buur iskugu midtahay, oo weliba Hargeysa kalsooni buuxda ku qaba.
Go'ankaa Cade Muse waxa uu halis geliyey denahii gumaysiga, waayo, waxa uu ka baqayaa in iftiinka gobanimada Somaliland uu jahawareerka ka saaro Somaliya iyo caalamka intiisa kale. Markaa, waxa uu gumaysigii si deg deg ah uga qaban qaabiyey Djibouti kulan loogu magac daray Suuganta Somalida. Ujeedaduna waxay ahayd in la abuuro qiiro been ah oo waddani-nimo, si waxayeelo loogu geysto degenansha Somaliland.
Rabi mahadii, dadka Somaliland garaadkooda ayaa bislaaday, si fiican ayey u garteen ushii holcaysay ee Hadrawi la carar la yidhi, ee lagu galbinayey durabanka beenta ah ee 'axyaa waddani'. Hadrawi waxaba kama ogayn dibin-daabyadan ( doqontu xadhkaha lagu xidhayo, xusulada ayey ku sidataa).
Haddii gumaysigu in uun dareen dadnimo leeyahay,kuma amreen Ismacil Cumar Geele in masaakiin qaxooti ah uu ku laayo gaajo iyo haraad. Dadkan qaxootiga ihi waa dumar iyo caruur, wax ay ka og-yihiina ma jirto argagixiso.
Ujeedada, dumarkan iyo caruurtan bacadka loo wadhay waxa weeyi, in wax-yeelo loo geysto nabad-gelyada Somaliland, oo la is nacsiiyo dadka somaliyeed. Somalidu waa in ay fikirtaa oo ay is weydiiyan, maxaa xabashidii iyo shisheeyihii kale Djibouti ugu furtay xeryo, dumarkii iyo carurtii somaliyeedna ee qaxootiga ahaana bacadka loogu daadiyey.
Waxan somalida u sheegi lahaa , in dadkii Dhulka Somalidu( Somaliland) , ay walaaloobeen. Waxan rabaa in somalida xusuusiyo seddex weedhood oo hore loo yidh;
1 Wax ha laguu sheegee , ee maankaga la kaasho
2 Hubsiimo hal baa la siista
3 Intaanad falin ka fiirso
Waxa ay ila tahay in somalidu runta isku sheegto, oo ay garato in , caddawga umadda somaliyeed uu SOMALI yahay.
Habon M Kalil Kalil2@bigpond.com